Nokuchengetedza basa - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Precision Kugadzira Service-China Yakachipa Yekugadzira Chikamu Mugadziri
Somunhu chakanakira chinouraya machine fekitari, OuZhan ane zvakawanda zviwanikwa kuti nokuchengetedza vagadziri dzakakwirira mwero pamwe. Chikamu chakanyatsogadzirwa chinowanzoda kuvezwa patembiricha yepamusoro kuti chigadzire chisina chinhu, uyezve ndokuzotumirwa kufekitori yedu yekugadzira kuti igadziriswe kwekupedzisira. Naizvozvo, semugadziri ane simba nemakumi emakore echiitiko muindasitiri yekugadzira indasitiri, isu hatisi kungoziva nezve akasiyana maitiro ekupedzisa, asi isu zvakare tine nzwisiso yakanaka yezvakasiyana zvigadzirwa zvekugadzira uye matekinoroji maitiro edu edu ekudzikira mafekitori, ndiko kuti iyo yekugadzira zvikamu zvemugadziri.
Saka kana iwe uchida kugeja masevhisi, iwe unogona kutsvaga zvakananga kune yeku forging fekitori, asi sarudzo iri nani kutsvaga terminal yekugadzira michina yekugadzirisa fekitori. Iwe unongoda kutumira yako chigadzirwa dhizaini kwavari, uye ivo vanowanzo kukubatsira iwe kuwana mhando yekugadzira mafekitori, shandisa makore avo ezviitiko kuronga ese maitiro ekugadzirisa uye maitiro kwauri. Zvese zvaunoda kuti uite kumirira kuunzwa kwechigadzirwa chakapedzwa, pachinzvimbo chekutsvaga yekugadzira fekitori uyezve yemuchina fekitori, inozokuchengetedza nguva yakawanda nesimba.
Ouzhan nemazvo nokuchengetedza nezvaanogona uye Features:
Chero angave mamiriro ezvinhu, tichigara tichiita yemhando yepamusoro uye pasina mamiriro ezvinhu kukanganisa hunhu hwedu ndicho chinonyanya kukosha chivakwa cheOuzhan.
Sezvo basa revatengi vedu risinganyatso zivikanwa nekuregerera, patakagamuchira dhizaini yavo, takaona kuti dhizaini yacho haigone kukanganwirwa, uye timu yedu yeinjiniya ichagadzirisa zvikamu nehunyanzvi hwekugadzira. Chimwe chiitiko chakakodzera ndechekuti vatengi havagone kushandisa CAD kudhirowa zvigadzirwa, asi vadhinda nemaoko, pasina kushivirira, chete mamwe makuru akakosha. Mune ino kesi, isu tichapawo hunyanzvi hwehunyanzvi vanodhirowa neakawanda ekugadzira mamashiviriro mamaki.
Kukura kweforoma.Pairi yepamusoro mhando yekuchengetedza furuu ndiyo fungidziro yekugadzira mhando yepamusoro yekugadzira zvikamu.Imwe yezvakanaka zvatiri kuona ndeyekuti isu tine yedu pachedu chishandiso uye kufa chitoro uye zvese zvekuchengetedza zvinofa zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa nesu.
• Yakavharwa kufa kugadzira. Shamwari yedu kambani nokuchengetedza muitiro yakavharwa-kufa nokuchengetedza, saka isu takatsunga kubudisa diki simbi forgings uye aruminiyamu Forgings. Tichishandisa kugadzira michina kubva kumatoni mazana matatu kusvika kumatoni mazana maviri nemazana maviri, tinogona kupa zviregerero zve0.2kg-50kg.
• Precision kumaliza. Dzimwe nguva, kuregerera hakugone kusvika padanho rekupedzisira kana kushivirira kwechikamu chekupedzisira. Panyaya iyi, isu kuchengetera vamwe tolerances apo nokuchengetedza, uye ipapo kuita zvakarurama machine. Aya maitiro ekugadzirisa anozopa vatengi vedu zvikamu zvakanyatsojeka.
• Kupisa uye kupisa kwepamusoro. Kuti uvandudze zvivakwa zvechigadzirwa, senge kuomarara, kurapwa kwekupisa kunoitwa mushure mekugadzira. Kambani yedu inogona kupa chero kupisa kurapwa kwehutano pachikumbiro.Tinogona zvakare kupa akasiyana epasi ekurapa masevhisi, senge kupenda, galvanizing, nezvimwe.
• Kuedza kusingakuvadze. Kune kukanganwirwa kwega kwega, tichaitisa kuyedza kusingakuvadze tisati taendesa kuti tione mhando yechigadzirwa.
• Tsika yekupakata sevhisi. Tinogona kupa chero akagadziriswa mapakeji masevhisi, ingo needto kutipa isu inodiwa yekupakata ruzivo.
Nei Uchisarudza Ouzhan Forging Services
1. Makore ekugadzira ruzivo
Ouzhan ave nyanzvi CNC machine kwemakumi emakore, tiri munzvimbo yakanaka pamwe chete nokuchengetedza chirimwa uye isu tiri vanoziva siyana maitirwo uye pezvakaitwa mu nokuchengetedza.
2. Multiple CNC yekugadzira kugona
Ouzhan inonyanya kutendeuka, kugaya, lathing, kuchera, CNC kutendeuka uye yekugaya masevhisi, kuti ugone kuwana yakakura sarudzo yematanho ekugadzirisa zvikamu zvako zvekuumba zvikamu kubva kuchikwata chedu chaunovimba.
Isu tine mainjiniya gumi munzvimbo yedu yeR&D, vese vari vanachiremba kana mapurofesa kubva kuYunivhesiti yeSainzi neTekinoroji yeChina. Tinogona kupa yakanyanya nyanzvi dhizaini uye machining masevhisi.
Tine hunyanzvi hwehunhu hwekuongorora vashandi uye zvigadzirwa, zvinoenderana neyepasi rose zviyero kune zvigadzirwa zvako kuti uedze, uye ubudise yakadzama bvunzo mushumo wevatengi 'ekugadzira zvikamu.
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Welcome to share your 2D or 3D drawings of your forging parts with us, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
Chii Chiri Kugadzira Sevhisi & Maitiro Ekuti Ugadzirire
Mukugadzira, simbi inoumbwa nekutsikirira, kurova, kana kuburitsa pasi pesimba kwazvo kuita zvikamu zvinonzi kukangamwirwa. Anenge chero simbi inogona kugadzirwa, kusanganisira kabhoni, maalloys uye simbi isina chinhu, aluminium, titanium, ndarira, mhangura, nezvimwewo simbi inotungidzirwa isati yatanga basa rekugadzira, asi haina kunyungudika sezviri mukukanda. Kune akatiwandei akasiyana marudzi ekuchengetedza maitiro, kusanganisira kutonhora kugadzira kana musoro kugadzira, kufa (yakavharwa kufa) kugadzira, kuvhurika kufa kwekunamatira uye isina musono kutenderera mhete yekugadzira. Rudzi rwekuchera sevhisi yakasarudzwa zvinoenderana nesimbi yekugadzirwa uye chimiro, saizi uye zvinhu zvechigadzirwa chekupedzisira.
Mukugadzira kutonhora, simbi yakagadziriswa haina kupisa zvakananga. Pane kudaro, inoumbwa pasi pekumanikidza kwakanyanya. Maitiro aya anoita kuti saizi yechigadzirwa inyatsoenderana nechimiro chekupedzisira. Iyo inowanzo shandiswa kugadzira zvidiki zvidiki senge zvekusunga. Kunyange hazvo simba rinodiwa pakuumba simbi rakakura kwazvo, sezvo kudziyisa kusingadiwe, simba rese rinodiwa kugadzira zvinhu uchishandisa nzira iyi idiki. Zvinyorwa zvakagadzirwa nenzira iyi kazhinji zvine simba nekuti kudziyisa hakuderedze simba uye kuenderana kwesimbi.
Kufarira kufa kwekugadzira ndiko kunonyanya kushandiswa kugadzira basa. Mukufa kwekugadzira, simbi workpiece inoiswa pakati pevaviri vanofa. Sezvo chakuvhuvhu chinoswedera, iro rekushandira rinozoita deformation yepurasitiki kudzamara divi rakakudzwa rabata padivi peforoma. Mukuita uku, nekuti imwe simbi yakanyungudutswa kubva pairi workpiece inoyerera ichienda kunze kweiyo induction indekisi, mwenje unoumbwa. Kana iyo flash ikatonhora, inopa iyo workpiece kuramba ku deformation, nokudaro ichiwedzera simba reiyo yekupedzisira chigadzirwa. Izvi zvinogadzira kumanikidza mukati memazhinji mativi uye zvinobatsira izvo zvinoyerera kupinda mune zvisina kuzadzikiswa induction.
Mukuvhura kufa kwekugadzira, iyo die haina kunyatso kufukidza iyo yekushandira. Panzvimbo iyoyo, pane dzimwe nzvimbo dzakavhurika dzinobvumidza ese maficha eiyo workpiece kuti ifambe kubva kune yakanangana inopisa inopisa mold kusangana kune inotonhorera yakavhurika nzvimbo Munguva yeakavhurika kufa yekugadzira sevhisi, iyo simbi workpiece inodziirwa pamusoro payo tembiricha yekudzokorodza, uye ipapo mashini maitiro anotanga. Munguva yese iyi, iro rekushandira rinofambiswa kuitira kuti ese maficha eiyo workpiece agone kugadzirwa. Sezvo workpiece inofamba uye ichitsiviwa, zvikamu zviri munzvimbo yakavhurika zvinotonhorera pazasi penzvimbo yesimbi yekudzokororazve, zvozodzokororazve apo kuenderera kuchiri kuenderera.
Kuridza mhete kunosanganisira kupisa simbi billet kune tembiricha yekugadzira. Iyo preform inozoiswa mune yemukati yekugaya mill. Kana iko kumanikidza kunoiswa kumadziro eiyo calender, iyo preform inotanga kutora cylindrical kana annular chimiro. Sezvo kukura kwemukati nekunze kuri kuwedzera mumasevhisi ekugadzira aya, nzvimbo yemuchinjikwa inoderera.
Kuchengeta Zvishandiso - Zvishandiso zvinoshandiswa Kugadzira
Brittle zvinhu hazvina kukodzera kuumba. Zvishandiso zvine plastiki yakanaka uye hombe yepurasitiki inokodzera kuumba, senge kabhoni simbi, alloy simbi, uye nesimbi dzisiri-simbi senge mhangura, aluminium uye magnesium alloys.
Valve & pombi
Ouzhan nokuchengetedza Surface Anopedzisa
Heano sarudzo yakasarudzika yesimbi pamusoro yekupedzisa masevhisi pane yako sarudzo yeiyo machined CNC yekuchinja zvikamu kuti uvandudze kutaridzika kwezvikamu, kumeso kutsetseka, kuramba ngura, uye mamwe maitiro: